Famaritana: ny Fire Tube Reels dia noforonina sy fanarahan-dalàna amin'ny BS EN 671-1: 2012 miaraka amin'ny fantsom-pahefana henjana mifanaraka amin'ny fenitra BS EN 694: 2014. Ny kofehy fantsom-boaloboka dia manome tobim-piadiana afo miaraka amin'ny famatsian-drano tsy tapaka avy hatrany. Ny fananganana sy ny fahombiazan'ny fantsom-pandehanan-tsolika miaraka amin'ny fantsom-panajana henjana dia manome antoka ny fametrahana sahaza ny tranobe sy ny asa fanamboarana hafa ampiasain'ny mponina. Ny fantson-tsolika afo dia azo ampiasaina tsy misy fiovana amin'ny famokarana wi ...
Famaritana: Ny fivorian'ny rakotra fantsom-bokatra dia ao anatin'ny tranobe eo amin'ny toeram-pivoahana lena na maina. Misy fantsom-batana izay ahantona ny fantsom-bokotra layflat (30m) sy ny fitambarana, ny nozera, ny fantsom-bokotra, ny valopy zoro, ny nosy. mamela ny rano hikoriana amin'ny fantsona aorian'ny fanesorana ny fantsom-bokotra sy ny vavahady. Ny habaka dia misy amin'ny haben'ny 1,5 "sy 2.5" .Misy fomba roa fametrahana ny talantalana fantsom-pifandraisana. Ny iray dia amin'ny alàlan'ny bracket amin'ny rindrina ary ny iray kosa dia amin'ny manamboatra zoro mahitsy v ...
Famaritana ny forona afo dia vita amin'ny firaka varahina. Ny zavatra sasany dia vita amin'ny plastika sy nylon fitaovana. Ampiasaina miaraka amin'ny roulouge afo mba hitana ny andraikitry ny jetting rano. Ny nozera dia manana asa roa: Jet sy famafazana. Rehefa mampiasa dia atodiho fotsiny ny lohan'ny noza raha ilaina. Tombontsoa manokana: ● Fitaovana: varahina sy tetika ● habe: 19mm / 25mm ● tsindry miasa: 6-10bar ● Tsindry fitsapana: 12bar ● Mpanamboatra ary voamarina amin'ny dingana fanodinana BSI: Sary-bobongolo –Hose sary -Assem ...
Jet spray spray miaraka amin'ny valizy fanaraha-maso
FANAZAVANA: Ny fantsom-panafody jet miaraka amin'ny valizy fanaraha-maso dia nozongo karazana tanana. Ity fantsom-panafody ity dia misy aliminioma na plastika ary vokarina mba hanarahana ny fenitra BS 5041 Fizarana 1 miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny fantsom-pifandraisana mifanaraka amin'ny fenitra BS 336: 2010. Ireo nozera dia voasokajy ho ambany fanerena ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 16 bar. Ny famaranana anaty ny famaranana ny nozeta dia avo lenta amin'ny famerana fetra farany ambany izay mifanaraka amin'ny fantson-drano ...
Kabinetra mihosin-tsolika afo
Famaritana Ny kabinetra famonoana fantsom-borona dia vita amin'ny vy malefaka ary apetraka amin'ny rindrina indrindra. Araka ny fomba, misy karazany roa: ny fialantsasatra napetraka ary ny rindrina nitaingina. Ampidiro ao anaty kabinetra araka ny fepetra takian'ny mpanjifa ny famonoana afo, ny famonoana afo, ny vavon'ny afo, ny valizy sns. Rehefa vita ny valizy, dia ampiasaina ny teknolojia fanapahana laser ary ny teknolojia fanaraha-maso mandeha ho azy mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra tsara. Ny loko sy ny ivelan'ny kabinetra dia samy loko, mahomby mialoha ...
BS336 adaptatera tokana
Famaritana: Adapter tokana dia adapter karazana tanana. Ireo adaptatera ireo dia vita amin'ny varahina sy alimina namboarina mba hanarahana ny fenitra BS 336: 2010. Ireo adaptatera dia voasokajy ao ambany fanerena ambany ary mety ampiasaina amin'ny tsindry fidirana nominal hatramin'ny 16 bar. Ny famaranana anaty ny famaranana ny adaptatera rehetra dia manana kalitao avo lenta miantoka fameperana ambany mikoriana izay mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitiliana rano. Matetika izy io dia ampiasaina miaraka amin'ny hydrant afo, izay afaka manaraka ny rafitry ny t ...
Kopia Storz Tube
Famaritana: ny fantsom-pifandraisana Storz dia ampiasaina amin'ny serivisy fitaterana rano an-dranomasina mpiady anaty rano izay ao anaty sambo. Ny setrin'ny fantsom-pantsana dia mizara roa. Iray mifandray amin'ny valizy, ary ny iray mifandray amin'ny nozera. Rehefa ampiasaina, sokafy ny valva ary afindraho amin'ny vavahady ny rano mba hamonoana ny afo. Ny kofehy STORZ Alemanina dia voaravaka, miaraka amin'ny endrika malefaka sy tanjaka avo. Amin'ny dingam-pamokarana, manaraka tsara ny fenitra an-dranomasina amin'ny fikirakirana sy testin ...